अनुपमको बर्थडे समारोहमा देखियो यस्तो रमाईलो, ७ रोपनी जग्गा र २ लाख नगद कसले दियो यति ठुलो गिफ्ठ ? (भिडियो) – An Online Entertainment News Portal
HomeEntertainmentअनुपमको बर्थडे समारोहमा देखियो यस्तो रमाईलो, ७ रोपनी जग्गा र २ लाख नगद कसले दियो यति ठुलो गिफ्ठ ? (भिडियो)
अनुपमको बर्थडे समारोहमा देखियो यस्तो रमाईलो, ७ रोपनी जग्गा र २ लाख नगद कसले दियो यति ठुलो गिफ्ठ ? (भिडियो)
June 11, 2018 sutraentertainment Entertainment, Event, Kollywood, News, Videos 0
कलाकार अनुपम श्रेष्ठले आफ्नो जन्मदिन भव्य रुपमा मनाएका छन् । आफ्ना बाबा ममी तथा नेपाली कलाकारहरुकामाझ उनले आफ्नो जन्मदिन मनाएका हुन् । उनको जन्मदिन समारोहमा नेपाली नायिकाहरुको उल्लेख्य सहभागीता रहेको थियो । जन्मदिन मनाईरहेका अनुपमले आजको दिन निकै रमाईलो भएको भन्दै यो खुशीयालीमा केक काटेर खुशी मनाउन सबै सहभागीहरुलाई सम्बोधन गरेका थिए ।
जन्मदिन समारोहमा उनले बाबुआमाको अगाडी आफू केही नभएको बताएका थिए । जन्मदिन समारोहमा अनुपमका बाबुले अनुपम आफूहरुको छोरा पनि छोरी पनि भएको प्रतिक्रिया दिएका थिए । उनले अनुपमलाई ७ रोपनी जग्ग र २ लाख नगद उपहार दिएका थिए ।
यस्तो देखियो क्रिएसनका पहिरनहरुको ‘फेसन शो’ (फोटोफिचर)
‘बोल मायाँ’ मा सबैलाई रुवाएकी अञ्जली कम्मर मर्काउदै नाचेको अबस्थामा भेटिईन् (भिडियो)